भरतपुरमा अब डिजिटल प्रणालीबाट नक्सा पास, कसरी हुन्छ नक्सा पास ? – Sarokar online
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र ०४, २०७८ | १८:३१:३५
चितवन : अब भरतपुर महानगरमा घरको नक्सा पास गर्दा कागजी झन्झट बेहोर्नु नपर्ने भएको छ । महानगरमा निर्माण हुने घरको नक्सा पास अब सफ्टवेयरबाट हुने भएको हो । नक्सा पासको लागि लाइन बस्ने झन्झट भएकाे गुनासो आएपछि महानगरले त्यो सेवा सुरुवात गरेको हो । शुक्रबारबाट नागरिकले घरैमा बसेर नक्सा पास गर्न सक्नेछन् ।महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ९ की सुस्मा केसीलाई नक्सा पासको अनुमति पत्र प्रदान गरी सेवाको सुरुवात गरेकी हुन् । दाहालले महानगरलाई कागजविहिन बनाउने नीति अनुसार काम गरिएको बताइन् ।
“हामीले महानगरलाई स्मार्ट सिटिको अवधारणामा अघि बढाएपछि त्यसै अनुसार यो सेवा सञ्चालन गरिएको हो”, उनले भनिन्, “सेवाग्राहीले झन्झट र दु:ख पाएको गुनासो आइरहन्थ्यो । अब त्यस्ता भन्झट बहोर्न नपर्ने भएको छ ।”
सबै भन्दा पहिले कन्सल्टेन्सीले अनलाइनमा विवरण इन्ट्री गर्छ । त्यसपछि इन्जिनियरले ठीक भए नभएको जाँच गरेपछि घरको नक्सा अनलाइनबाट पास हुनेछ । नक्सा पासका लागि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि समाज(एनसेट) ले प्राविधिक सहयोग गरेको छ ।कसरी हुन्छ नक्सा पास ?
नक्सा पास गर्न चाहिने जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता, फोटो, मालपोत तिरेको रसिद, नापीनक्साजस्ता घरजग्गामा सरोकार राख्ने कागजपत्र स्क्यान गरेर सबै फाइल ’एटयाच’ गरी पठाइन्छ । इन्जिनियरले सबै जाँच गरेपछि टेक्निकल कक्षामा पठाउँछन् । भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता पूरा गरेको नगरेको हेरर सबै ठीक भएपछि राजस्वमा गएपछि विधिवत दर्ता भई वडाको डेस्कमा जान्छ । वडा डेस्कमा पुगेपछि १५ दिने सूचना टाँस गरी सँधियारको दाबीविरोध, प्राविधिकबाट नक्साअनुसारको फिल्ड लगायत जाँच गरिन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरी वडा डेस्कले अपलोड गरेर फेरि केन्द्रमा पठाइदिन्छ र त्यपछि नक्सा पास हुन्छ ।